Seychelles oo Somaliland ku eedeysay iney jebisay sharciga la dagaalanka Burcad Badeeda – Somali Top News
Seychelles oo Somaliland ku eedeysay iney jebisay sharciga la dagaalanka Burcad Badeeda
Dowladda Seychelles ayaa cambaareysay 19 Maxaabiis ah oo loo heystay Burcadbadeednimo, kuwaas oo dhowaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi u fidiyey cafis, lagana sii daayey xabsi ku yaalla magaalada Hargeysa.
War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibada dalkaasi ayaa lagu sheegay in Somaliland ay ka baxday heshiis ay horay ula gashay Seychelles, kaas oo ku aadanaa in Maxaabiista lagu eedeeyey Burcadbadeednimada ay ku sii jiraan xabsiga inta ay ka dhameysanayaan xukunka ku dhacay.
Sidoo kale Seychelles ayaa sheegtay inay la yaab ku noqotay tallaabada lagu sii daayey Maxaabiistaasi ee dib loogu siiyey Xorriyadooda.
“Sanadkii 2011 waxaan kala saxiixanay heshiis isfaham oo la xiriiray iswaydaarsiga maxaabiis xukuman, sanadkii 2012 maxaabiis gaaraya 19 ayaanu ku wareejinay hay’addaha maamula xabsiyada Somaliland si ay u dhamaystaan xukunka ku dhacay shaacinta sii daynta maxaabiistu waxay nagu noqotay la yaab sababtoo ah waa ficil la qaaday iyada oo aan waxba nalaga ogaysiin.” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Seychelles.
Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Maxaabiista la sii daayey ay xukunaayeen xabsi u dhaxeeya 30, 36 illaa 42 sano, islamarkaana ay hadda xirnaayeen kaliya sagaal Sano.
Ugu dambeyn Seychelles ayaa shaacisay in tallaabada ay qaaday Somaliland ay jabisay sharciga la dagaalanka kooxaha Burcadbadeeda Soomaalida.
← Muxuu madaxweyne Farmaajo ka hortaagnaa heysashada dhalashada Mareykanka?
Itoobiya oo dadaaladii ugu dambeeyay ku bixineysa Axmad Madoobe →
Kala Shaki soo ifbaxay kadib markii xabsiga laga sii daayay sarkaal katirsan Al Shabaab
Akhriso: Shuruudaha laga doonaya musharixiinta Koofur Galbeed
Imaaradka Carabta oo muwaadiintiisa uga digay iney u safraan Soomaaliya